Tao anatin’ny roa volana : Diplomaty lehibe 6 no efa noraisin’ny Filoha -
AccueilSongandinaTao anatin’ny roa volana : Diplomaty lehibe 6 no efa noraisin’ny Filoha
Tao anatin’ny roa volana voalohany tamin’ity taona vaovao ity dia efa nandray diplomaty lehibe enina sahady ny Filoham-pirenena ankoatra an’ireo fitokanan-javatra vita any amin’ny faritra sy ny fanakaikezana ny vahoaka. Araka ny efa voalazany hatrany diaa ireo minia mikimpy no tsy mahita ary ireo manampin-tsofina no tsy mahare ny asa fampandrosoana nataon’ny fitondram-panjakana.
Efa mipetraka ny fitokisan’izao tontolo izao. Tsy ny tontolo Frankôfôna ihany fa izao tontolo izao. Tafaverina amin’ny toerany i Madagasikara eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena vokatr’ireny asa natao tamin’ny taona lasa ireny. Niverina ny fitokisana, niverina ny famatsiam-bola, niverina ny fihazakazahan’ny firenena hafa te hiara-miasa amin’i Madagasikara. Tamin’ity taona ity ohatra, vao tamin’ny 6 Janoary 2017 dia efa tonga teto ny minisitra ny Raharaham-bahiny Sinoa. Fantantsika ny tanjak’izany firenena sinoa izany ary tetikasa maro no iarahana miasa. Herinandro taorian’io dia tonga teto ny Filoha tiorka. Raha ny resaka fitaterana an’habakabaka dia manana ny tanjany i Tiorkia. Ny “Turkish Air-lines” dia anisan’ny fahatelo maneran-tany. Nisy fanaovan-tsonia miaraka amin’ny lafin’ny fampiroboroboana ny ara-toekarena. Ny mpandraharaha sy mpampiasa vola tiorka dia nisy hatramin’ny 250 no tonga teto, nijery hoe inona no zavatra azo atao eto Madagasikara.
Tsy azo hamaivanina
Vita iny dia tonga indray ny sekretera-panjakan’nyVatican na ny Praiminisitra, ny Papa Ray masina no ilazana azy Son Eminence Petro Parolin. Nijianona herinandro teto izy. Eo ny resaka finoana fa eo koa ny faha-50 taona nisian’ny fiaraha-miasa ara-diplomatika teto. Ny Katolika dia manana ny lanjany amin’ny lafiny ara-tsosialy, ara-kolotoraly, amin’ny fitaizana sy fanabeazana ara-tsaina satria any amin’ny toerana farany ambanivohitra rehetra any dia misy ny Kolejy Katolika manabe ny zaza malagasy. Manana sehatra mikarakara ny resaka fampandrosoana izy ireo eo amin’ny fambolena, fiompiana, mampianatra ny olona amin’ny lafiny teknika, sns…Tsy azo ambaniana ny fisian’ny finoana katolika amin’ny fandraisana anjara eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana eto Madagasikara.
Ho avy ny mpanjakan’i Monaco
Taorian’izay na dia tsy ofisialy aza dia ny fahatongavan’ny zanakavavin’ny Mpanjaka Tailandezy. Manana ny tanjany izany eo amin’ny sehatry ny fizahantany. Hitarika mpizahatany betsaka ny fahatongavany eto. Tany Andasibe, Allée des Baobabs, nanao sidina tamin’ny Tsingin’i Bemaraha izy, sns…Ny fahatongavany teto dia hitarika mpizahatany betsaka ho tonga eto. Hitombo araka izany ny mpizahatany tailandey ho avy eto Madagasikara. Ny tanjona dia mba hahazo mpizahatany iray tapitrisa isika amin’ny taona 2020. Ankoatra izay raha tsy misy ny fiovana dia ho avy eto koa ny zanaka lahin’ny Mpanjakan’i Monaco, Rainier III, antsoina hoe Albert II, teraka tamin’ny 1958. Tamin’ny 12 Jolay 2005 izy no lasa Mpanjakan’i Monaco niakatra teo amin’ny voninahiny. Ny 2 Jolay 2011 no natao mariazy tamin’ny mpanjakavavy Charlène izy. Ny 10 Desambra 2011 no niteraka an’i Jacques sy Gabriella izy mivady. Ny sehatry ny fizahantany no tena isany mampiavaka an’i Monaco. Mponina maro avy amin’ny firenena 125 no ao aminy. Mahatratra 32 796 ny isan’ny mponina araka ny fanisana tamin’ny 2008. Ny 28 % n’io dia frantsay , ny 17 % Italiana ary ny 6 % Britanika. Araka izany dia tsy mitoka-monina intsony i Madagasikara fa efa eo anivon’izao tontolo izao. Maro tsy tambo isaina ny vahiny ho avy eto amin’ny resaka toekarena ary manokatra ny varavarana amin’izany isika. Ny fivoahan’ny Filoham-pirenena any ivelany dia fanohizana an’izany resaka rehetra izany.